I-CPhI sisiganeko sokwenza amayeza esisekwe esingaphezulu kweminyaka engama-30 yamava okuhlanganisa kunye nabashukumisayo kunye ne-shaker kwi-pharma. Igama elisekwe kolu shishino, i-CPhI kwihlabathi liphela kukuqaqanjelwa kwekhalenda ye-pharma edibanisa amawaka eengcali ze-pharma kunye nabathengisi abavela kwihlabathi liphela phantsi kophahla olunye. I-CPhI kwihlabathi liphela kunye neziganeko zayo ezihlanganisiweyo ICSE, P-MEC, FDF, InnoPack kunye neBioProduction nganye yahlulwe yangamacandelo athile kwimveliso ukwenzela ukuba icandelo ngalinye libonakale ngakumbi kwaye livumele iindwendwe ukuba zifumane ngokulula kwaye zivelise iimveliso ezijongileyo. ye. UFinging uthathe inxaxheba kwi-CPhI ngaphezulu kweminyaka emi-5 kumazwe amaninzi afana neJamani, iSpain kunye ne-India.
Idayi ephakathi ziimveliso zepetroli ezantsi, eziqhubekekiswa ngakumbi kuso nasiphi na isicelo. Ekuqhubekeni ziguqulwa zibe zidayayi ezigqityiweyo kunye nee-pigment. I-2,4-Dinitrochlorobenzene (DNCB) yindawo yecandelo lezinto eziphilayo. Sisisiqina esimthubi esinyibilikayo kwizinyibilikisi eziphilayo. Kubalulekile phakathi ekuvelisweni kwemveliso yedayi yesalfure. IFoing ijolise kule nto iphakathi iminyaka emininzi.
Ngenxa yemeko eqhubekayo ye-COVID-19, uninzi lwemiboniso yethu iyarhoxiswa okanye imisiwe. Esi sigqibo khange sifikeleleke ngokulula, kodwa sicinga ngempilo nokhuseleko loluntu lwethu, sithathe isigqibo sokuthatha amanyathelo ngoku, sinika abo sisebenzisana nabo ixesha elaneleyo lokuhlengahlengisa izicwangciso zabo. Sithanda ukuthatha eli thuba ukufumanisa abathengi abatsha kwi-Intanethi. Kwakhona lithuba elihle lokuba ube nomthengisi omnye.
I-CPhI Delhi India i-2019
I-CPhI Madrid Spain i-EXPO 2018
I-CPhI yaseFrankfurt eJamani i-EXPO 2017